Ny mari-pamantarana fantsona fitantanana fananana mahomby indrindra
Manampia marika amin'ny vidiny alefa isaky ny OTA sy ny sehatra famandrihana hahazoana tombony mitovy amin'ny famandrihana tsirairay.
Ireo mpamatsy fandraisam-bahiny izay manapa-kevitra ny hizara ny lisitr'izy ireo amin'ny alàlan'ny tranokalan'ny antoko fahatelo amin'ny ankamaroan'ny tranga dia voatery mandoa vaomiera iray. Na dia mety manapa-kevitra ny hitelina ny vidiny mifandraika amin'izany aza ny hotely sasany, ny mpitantana ny fanofana fialan-tsasatra marobe sy ny mpandraharaha amin'ny serivisy dia mety maniry ny hanavaka ny vidiny isaky ny fantsona hanonerana ny vaomiera fanampiny tazomin'ny masoivoho.
Ohatra, mandritra Airbnb 3% fotsiny no aloan'ny host, Expedia etsy andaniny kosa dia miakatra 18%. Mba hanonerana ny fahasamihafana eo amin'ireo ambaratonga komisiona ireo dia maro ny mpampiantrano maniry ny hanampy marika amin'ny fantsona rehefa mampiasa mpitantana fantsona.
Ahoana no ahafahan'ny Zeevou's Channel Markup Help manampy?
Zeevou ny Channel Manager mamela anao manampy mari-pamantarana fantsona rehefa mampifandray ireo OTA an'ny antoko fahatelo sy ireo sehatra famandrihana. Azonao atao ny manampy na isan-jato na vola raikitra isan'alina isaky ny fantsona, na afaka mampiasa fitambaran'izy roa ianao. Io dia ahafahan'ny mpampiantrano mahazo vola mitovy amin'ny ao ambadiky ny famandrihana tsirairay, na aiza na aiza fiavian'ilay famandrihana.
Raha tsy izany, mampiasa ny fisondrotana endri-javatra, mpampiantrano dia afaka mampihena ny isa navoaka tao amin'ny tranonkalany manokana noho ny taha tombony ambony azon'izy ireo atao. famandrihana mivantana. Ankoatr'izay, raha maniry ny hametra ny mpanjifa izay mahazo tombony amin'ny fihenam-bidy toy izany ho an'ny mpamandrika mivantana ianao dia afaka mamoaka kaody voucher hidiran'ny vahiny amin'ny fisavana raha te hahazo tombony amin'izany fihenambidy izany.
Mba hanampiana ireo mpampiantrano izay miasa amin'ny faritra misy ny lalàna momba ny fitoviana eo amin'ny lahy sy ny vavy, Zeevou dia namolavola fiasa mifandraika amin'ny fahaiza-mitantana drafitra tahan'ny maro ho an'ny karazana singa mitovy. Noho izany dia azonao atao ny manaparitaka ny sasany amin'ny tranokalan'ny famandrihana mivantana anao, mampihatra teny somary hafa amin'ny famandrihana mba tsy ho maloto amin'ny fameperana napetraky ny fifanarahana ataon'izy ireo amin'ny OTA.